Ụkwụ m ọ ga-akawanye ibu site na ịgba ígwè - BikeHike
Ịgba ígwè ọ na-eme ka ụkwụ gị dị gịrịgịrị?
Kedu otu m ga-esi kwụsị ụkwụ m ka ọ ghara ibu ibu mgbe m na-agba ịnyịnya?
Gịnị mere ụkwụ m ji na-akawanye ibu site n'ịgba ígwè?
Kedu ka ndị na-agba ígwè ga-esi enweta ụkwụ akpụkpọ anụ?
Ịgba ígwè ọ na-enye gị nnukwu nsogbu?
Ịgba ígwè ọ na-eme ka akpụkpọ ahụ gị dị?
Ịgba ígwè ọ na-ebelata afọ?
Ịnya igwe kwa ụbọchị ọ na-akarị oke?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji nweta ịgba ígwè dabara adaba?
Ịnya igwe ọ dị mma maka apata ụkwụ?
Ịnyịnya igwe nwere ike dochie ụbọchị ụkwụ?
Ịgba ígwè dị mma maka ọdịdị ahụ?
Gịnị kpatara ndị na-agba ígwè ji dị gịrịgịrị?
Ịnya igwe ga-ada ụda ụkwụ m?
Ịgba ọsọ ma ọ bụ ịgba ígwè ọ ka mma maka ịgbatị ụkwụ?
Kedu ka ịnya igwe ga-esi gbanwee ahụ m?
Ibu ole ka ị ga -atụfu ịnya igwe 30 nkeji n'ụbọchị?
Ịnya igwe kwụ otu ebe na-enye mmega ahụ nke ikuku na-adịghị emetụta ma na-enye aka na-ere abụba anụ ahụ ọkụ. Ịgba ígwè mgbe nile nwere ike ime ka ụkwụ gị dị gịrịgịrị. N'ihi na onye ọ bụla nwere ọchịchọ nke ukwuu elu site na mmega ahụ, mbenata iguzogide na ịṅa ntị na usoro gị ga-enyere gị aka imeta ibu ọnwụ na-enweghị na-agbakwụnye muscle uka.
Otu esi agba igwe iji felata ibu ma ghara imepụta nnukwu ụkwụ Ebumnuche maka ịnya ogologo ogologo, kama ịnya igwe siri ike, iji mee ka calorie gị na-ere ọkụ ma wuo ntachi obi. Jiri ọzụzụ nkeji oge iji bulie calorie ọkụ. Họrọ ebe dị larịị karịa ugwu n'oge mgbatị ahụ gị.
Otú ọ dị, mgbe akwara dị n'ụkwụ gị na-esiwanye ike, ha na-ebuwanye ibu. Keoni Hudoba, onye okike nke Cyc Method, na onye nkuzi ịgba ígwè na NYC's Cyc Fitness na-ekwu, "Ọ bụrụ na ị ga-agba ịnyịnya na nguzogide siri ike ruo ogologo oge, ọ ga-ekwe omume na ị nwere ike nwetakwu ahụ ike.
A na-eme ọsọ ọsọ ịgba ígwè n'ogo dị ala. A na-eme mgbatị ahụ nke ịnya igwe n'èzí n'ime obere gia n'okporo ụzọ dị larịị iji nweta ụkwụ ndị na-agba ígwè. Ihe dị iche na mgbatị ahụ nke ugwu bụ na ahụ gị na-agbakọ ụkwụ ugboro ugboro nke na-eduga n'ịgba ụda ahụ.
Ịgba ígwè agaghị enye gị nnukwu agba, ma ọ nwere ike inye gị ọdịdị mara mma n'ihi uru cardio na uru na-ewuli elu. Ịgba ígwè na-arụ ọrụ ụkwụ gị na glutes, karịsịa mgbe ị na-arịgo, mana ọ naghị adịru ogologo oge ma ọ bụ na-enye ihe mgbochi zuru oke iji wuo akwara buru ibu.
Ịnya igwe kwụ otu ebe bụ ezigbo mgbatị ahụ cardio. Ọ nwere ike inye aka mee ka ahụike obi gị na ngụgụ dịkwuo elu, mee ka oruru ọbara gị dịkwuo mma, wulite ike ahụ ike, ma belata ọkwa nrụgide gị. N'elu nke ahụ, ọ nwekwara ike inyere gị aka ọkụ abụba, kalori ọkụ, na ifelata ibu.
Ịgba ígwè kwa ụbọchị dị mma ma a na-eme ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ahụ gị nwere oge zuru ezu iji gbakee. Ndị na-agba ịnyịnya na-asọ mpi chọrọ ụbọchị mgbake n'ihi ogo ọzụzụ ha na agbụrụ ha siri sie ike, ebe ndị na-agba ígwè nwere ike ịnya igwe n'ejighị ụbọchị ezumike.
Mgbe ezumike ogologo oge gasịrị, achọpụtara m na ọ na-ewe n'etiti ụbọchị asaa na ụbọchị iri ịmalite inwe mmetụta dị mma na igwe igwe ọzọ. Ụbọchị ole na ole mbụ ga-abụ mgba ma mgbe otu izu gachara ma ọ bụ otú ahụ, ị ​​​​ga-adị mma ịmalite ịmalite ibu ọzụzụ, mgbe ahụ ị na-aga nke ọma na ụzọ mgbake.
Ịgba ígwè nwere ike inye aka na-ada ụda ụkwụ, apata ụkwụ na ụkwụ na ịgba ọsọ na igwu mmiri, ịgba ígwè bụ otu n'ime mgbatị ahụ kacha mma; ọ ga-ewusi ike na ịzụlite nkwonkwo ụkwụ na mọzụlụ ma nwee ike inyere gị aka ịkwụsị abụba na apata ụkwụ na ụmụ ehi.
Mee ka amara na ị nweghị ike "dochie" ụbọchị ụkwụ. Ee, ịnya igwe mgbatị ahụ ma ọ bụ ịnya klaasị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu ga-enyere aka n'ịkwalite ahụ ike n'ụkwụ.
Ịgba ígwè bụ ụzọ dị mma iji chịkwaa ma ọ bụ ibelata ibu, n'ihi na ọ na-ebuli ọnụego metabolic gị, na-ewuli akwara ma na-ere abụba anụ ahụ ọkụ. Ọ bụrụ na ị na-agbalị ifelata, ịgba ígwè ga-ejikọta ya na atụmatụ iri nri dị mma. Nnyocha Britain gosiri na ịnya igwe kwụ otu ebe ọkara awa kwa ụbọchị ga-ere abụba ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilogram ise n'ime otu afọ.
6. Gịnị mere ogwe aka ndị na-agba ígwè ji na-akpụ akpụ? Akụkụ ụfọdụ ọ bụ ahụhụ na-eri anụ ahụ na ngwa anyị nwere ọsụsọ, mana ọ bụ n'ihi na (nke a dị mgbagwoju anya) pedals dị n'okpuru ụkwụ anyị na ogwe aka anyị anaghị eme ihe ọ bụla ma e wezụga iji nwayọ nwayọ.
Dị ka egwuregwu ntachi obi, ịgba ígwè nwere ike ịdị mma nke ukwuu maka ahụ ike nke obi, yana akwara akwara, na-eme ka ahụ dịkwuo mma na ịkwalite ọdịdị ahụ. Ma ọ nwere ike inye aka melite ụda akwara nke ụkwụ gị, glutes na isi.
Ịgba ígwè nwere ike inyere gị aka ịzụlite ahụ ike na ọkara gị ala. Ịgba ọsọ agaghị eduga n'ọtụtụ buru ibu, mana ọ nwere ike inyere gị aka ịmalite akwara siri ike ma nwee ụda. Ịkwanye pedal mgbe ị na-agba ịnyịnya bụ ọzụzụ nguzogide na-ewuli akwara ụkwụ.
Ọ dị mfe ịfefe na nnukwu efere nke ice cream karịa ịrụ ọrụ. Agbanyeghị, ọbụlagodi na ịmeghị mgbanwe na atụmatụ nri ị na-emebu, ịnya igwe mgbatị ahụ naanị nkeji 30 ugboro ise n'izu ga-enyere gị aka ịtụba otu paụnd abụọ ma ọ bụ abụọ kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ị na-eri nri dị mma na mgbatị ahụ, ị ​​nwere ike ịtụ anya na ị ga-atụfu ọbụna karịa.
Azịza ngwa ngwa: Ịgba ígwè nwere ike mee ka ụkwụ gị buru ibu
Ajụjụ: Ịgba ígwè ọ na-eme ka ụkwụ gị buru ibu
Ajụjụ: Ịgba ígwè ga-eme ka ụkwụ m buru ibu
Ajụjụ: Ịgba ígwè ọ na-enyere akwara Unterus aka
Ịgba ígwè ọ na-enyere aka iwulite akwara
Ịgba ígwè na-enyere aka ụda ụkwụ
Ajụjụ: Ịkpụ ụkwụ ọ na-enyere aka ịgba ígwè
Azịza ngwa ngwa: Ịgba ígwè ọ na-enyere ahụ dị elu aka
Ajụjụ: Ịgba ígwè ọ na-eme ka ụkwụ gị dị arọ ma ọ bụ karịa
Kedu ka ịgba ígwè si enyere ahụ gị aka
Ajụjụ: Ịgba ígwè nwere ike inye aka na abụba dị ala
Olee otú ịgba ígwè pụrụ isi nyere ahụ́ gị aka